XOG+SAWIRRO: Maxaa ka soo baxay kulan gaar ah oo ay sannado ka dib yeesheen Farmaajo & Xasan Sheekh? – Puntlandtimes
XOG+SAWIRRO: Maxaa ka soo baxay kulan gaar ah oo ay sannado ka dib yeesheen Farmaajo & Xasan Sheekh?
ANKARA(P-TIMES)- Madaxweynaha Jamhuuriyada Faderaaliga ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la kulmay Madaxweynihii hore ee xilka uga horeeyey Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana uu kulankan ka dhacay magaalada Ankara ee dalka Turkiga.
Kulanka intii uu socday waxay labada masuul iska wareysteen xaaladdaha dalka Soomaaliya, Isbedelada waa weyn ee dhacay ee barriga Africa iyo sidii Soomaalidu ay uga faa’iideyan lahayd.
Madaxweyne Farmaajo ayaa uga waramay Madaxweyne Xasan Sheekh xaaladda dalka, gaar ahaana waxyaabaha la qabtay iyo sidda uu ugu baahan yahay in ay wada shaqeeyaan oo laga shaqeeyo Soomaaliya oo garta wadiiqada guusha.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in ay Soomaaliya ka soo gudubtay marxalado adag, wuxuuna sheegay in ay farxad u tahay in wadiiqadii dawladnimada la hayo, loona baahan yahay taxadar dheeraad ah in laga yeesho arrimaha qaarkood.
Xildhibaan Xasan Sheekh ayaa talooyin badan ka siiyey Madaxweyne Farmaajo muhiimada ay leedahay in xooga la saaro wada hadalka is qancinta iyo tanaasulka siyaasadeed, si looga gudbo marxaladaha qalafsan, maadaama xiligiisii ay ahayd waqtiguu ugu adkaa ee Soomaaliya soo mara, balse uu kaga soo gudbay tanaasul siyaasaded.
Isku duubni danta wadajirka ah iyo midnimada Soomaaliya ayay labada masuulba isku raaceen in lagu gaari wadiiqada guusha, waxayna hoosta ka xariiqeen in loo baahan yahay in sharciga iyo Dastuurka dalka la dhawro, wax kastana isaga lagu dhaqo, xili ay jiraan marxalado ay dhif tahay in laga gudbana loo baahan yahay tanaasul,
Waa markii ugu horeysay ee ay is arag noocan oo kale ah yeesheen Madaxweyne Farjaamo iyo Madaxweynihii ka horeeyey Xasan Sheekh Maxamuud oo degan dalalka Turkiga & Tanzania, uuna aaday markii uu wareejiyey xilka Madaxtinimada horaantii sannadkii 2017-kii, ka dib markii looga adkaaday doorashadii dhacday 08 Februay 2017.